FAMPANJAKANA NY FAHALEMANA : Jiolahy 11 no saron’ny Polisim-pirenena tao Toamasina
Nahitam-bokany ny ezaky ny Polisim-pirenena ny amin’ny fanamafisana ny ady atao amin’ny famongorana ny asan-jiolahy, izay nihombo tokoa tao anatin’ny herinandro maromaro. 25 avril 2017
Misy mantsy amin’izao fotoana izao ny ezaka ataon’ny Polisy, izay manao bemidina eny an’arabe, misava ny môtô sy ny fiara, mbamina fisavana ny kara-panondrom-pirenena.
Miara-miasa matotra amin’ny Lehiben’ny fokontany sy ireo olona any anatin’ny fiaraha-monina ny Polisim-pirenena manoloana izao ezaka goavana mampandry fahalemana izao. Nandritra izay ezaka manokana izay dia jiolahy miisa 11 no sarona.
Misy amin’izy ireo no efa jiolahy mpamerin-keloka,ao ireo voarohirohy tamina raharaha vono olona tamin’ny tifitra basy sy tamin’ny antsibe. Ao koa ny voarohirohy amin’ny fidorohana zava-mahadomelina, tao ireo sarona teo am-pikotrehana ny asa fanafihana. Nanamafy ny Polisim-pirenena fa mitohy hatrany ny asa fisafoana tsy tapaka atao eto Toamasina.
Namoahana “Filazana Fikarohana” i Marco Randrianisa FIANTSOANA “ACTE ISOLÉS” (900) 2 mars 2021 Voaantso teny amin’ny biraon’ny Polisy tetsy Tsaralalàna indray CLEMENCE RAHARINIRINA (454) 5 mars 2021 Tsy hiara-dalana amin-dRavalomanana intsony ? FANAMBARAN’NY ANTOKO MFM (186) 2 mars 2021 Mikononkonona fanakorontanana ireo vehivavy RMDM ? HETSIKY NY VEHIVAVY 8 MARSA ANY DIEGO (97) 2 mars 2021 Jiolahy naman’i Del kely miisa fito voasambotra KIDNAPPING TAO AMBAKIRENY (95) 2 mars 2021 Voasoroka ny korontana nokasain’ ny RMDM hatao ANALAKELY - AMBOHIJATOVO (84) 2 mars 2021